राहत संकलन खातामा राज्यको ‘कब्जा’को कोकोहोलोको वास्तविक अर्थ बुझौँ – MySansar
3 thoughts on “राहत संकलन खातामा राज्यको ‘कब्जा’को कोकोहोलोको वास्तविक अर्थ बुझौँ”
बिष्णु जी अत्यन्तनै विद्वान र संस्कारयुक्त व्यक्ति लाग्यो ! वहा जस्तो व्यक्तिहरु नेपाल बनौन मात्र १० जना भए पुग्छ तर अफसोस छैनन् र पो त !
ल अझै राम्रा संस्कार युक्त विचार दिदै गर्नु होला बधाई छ !
एकदम ठीक हो, राज्यलाई विश्वास नगर्ने अनि अरुलाई के आधारमा विश्वास गर्ने ?
रबिन्द्र मिश्र जस लाइ १० करोड उठाउन सारा देश विदेश मा रहेका नेपालीले सहयोग गरे अहिले त्यो कहाँ छ ? त्यो डाँका को खाता चाही पहिले राष्ट्रिय करण गरौन् अनि अरुको गर्दै गरुला !